Matipi ekuzviisa kumakwikwi ekunyora | Zvazvino Zvinyorwa
Mazana emakwikwi ekunyora anoitwa gore rega rega kutenderera pasirese, mazhinji acho achitaura chiSpanish uye achigoverwa pamativi ese eAtlantic. Mune yako kesi, unogona kunge uchangopedza nyaya yaunogadzira ine mukana kana kuti iwe unotsvaga kuburitsa rondedzero yako neimba yekutsikisa nekuda kwemakwikwi ekunyora, zvikonzero zviviri zvinomanikidza kusvetukira mudziva chero iwe uchitevera izvi matipi ekuzviisa kumakwikwi ekunyora.
1 Nyoresa basa rako
2 Tsvaga makwikwi
3 Verenga mabheseni zvakanaka
4 Hapana zviperengo
5 Mubayiro upi waunoda?
6 Tanga zvishoma
7 Zvidiki zvidiki
8 Usaora mwoyo
Nyoresa basa rako
El rmain equisito kana zvasvika kune zviise pasi kumakwikwi ekunyora unogara mukunyoresa basa rako. Hapana chinofanira kuitika, muchokwadi hazviwanzo kuitika, asi iwe uchawana rugare rwepfungwa uchiziva kuti kana paine kushamisika kusingatarisirwi iwe unenge uine basa rako rakanyoreswa. Kana iri nyaya imwe chete, yakanakisa sarudzo ndeyewebhu safecreative, sezvo ichikubvumidza iwe kuunganidza marekodhi pasina kuzviita wega mune Kunyoreswa kwenzvimbo dzehungwaru uye ubhadhare 13 euros yenyaya imwe neimwe. Kana iwe uchiri kusarudza iyo yekupedzisira modhi, zvirinani nyora nyaya dzako dzese muvhoriyamu imwe chete kana, hongu, kana iri bhuku. Kuti iro basa rakanyoreswa riongororwe zvizere uye rakagadziriswa zvinobatsira zvakare.
Maminetsi ekupedzisira makwikwi ezvinyorwa anowanzo kuburitswa pasocial network izvo zvingangotadza kuenderana zvakanaka nezvinangwa zvako, ndosaka tichafanirwa kutsvaga mawebhusaiti anoburitsa anodaidzira emakwikwi ezuva nezuva ekunyora. Webs senge Tregolam kana, kunyanya, Writers.org Vanoburitsa zvinokwana zuva rega rega makwikwi ese mumutauro wechiSpanish, epasirese nepasi rose, zvinoenderana nerudzi (novel, nyaya pfupi, tsamba, notibhuku rekufamba ...)
Verenga mabheseni zvakanaka
Kunyangwe makwikwi mazhinji ezvinyorwa achiwanzo kuunza kufona nezvimwe zvezvinodiwa zvakakosha senge nyika yevatori vechikamu kana zuva rekuvhara kwekutambira kwemabasa., verenga zvachose pfungwa dzese dzechikumbiro zvakakosha zvakanyanya kana zvasvika pakurasa mumwe makwikwi uye kuenda kune unotevera. Iyo inodiwa yekuwedzera, nzira yekutakura kana, kunyanya, iyo inogara iri nharo chirevo cheiyo kupihwa kodzero ivo vakakosha kana tichifunga kuti tinonyatsoda kutora chikamu uye kana yedu novel iri yakakodzera kumakwikwi aya. Ehezve, kana iwe ukazvizivisa iwe pachako, zvinosangana zvese zvinodikanwa.
Dare redzimhosva remakwikwi ezvekunyora rinogona kugamuchira mazana emabasa mumwedzi uye zvisinei kuti une nhengo ngani, matekiniki ekudzinga anonyanya kuve nehasha. Kukanganisa kuperetera kunogona kuve kunopfuura chikonzero chakaringana chekubvisa nyaya pfupi kana novhero ipapo. Kunyanya kutarisisa kuchinhu ichi, pamwe nezvimwe zvese zvinodiwa zvekufona zvaunofanira kusangana nazvo.
Mubayiro upi waunoda?
Kana iwe ukatarisa kufona uye ukaona mubairo wemari waunogona kuhwina, zviratidzo zvaSekuru Scrooge zvemadhora zvinotorwa mumaziso ako. Ipapo iwe unoramba uchiverenga, "asi kana iwe ukahwina 3 euros mukutsinhana, uchafanirwa kupa kodzero dzese kubasa rako kusangano." Hmm, hatidi zvakadaro. Kuziva zvese zvinosanganisira chimwe mubairo kwakakosha kana tisingade kuora moyo, kunyanya kana munyika mune vanyori vane zvikonzero zvakasiyana: vamwe vanoita kunge vari mumakwikwi kungozivikanwa, vamwe nemari uye vamwe kushambadzirwa magazini kana edhisheni. Zvibvunze kuti: Unodei?
Kana iwe uri munyori ari kutanga uye iwe unoronga kuratidza rako basa kune imwe ye inonyanya kukwikwidza makwikwi pamwe mumwe munhu ane ruzivo anozopedzisira atora katsi mumvura. Zvandinoreva neizvi? Kuti zvichagara zvirinani kutanga zvishoma nezvishoma, nekutora chikamu mumakwikwi emuno, iwo ayo kunyangwe asiri kukupa mubhadharo wezvemari zviri nani zvinowirirana nezvimwe zvekukurudzira uye nenzira iyo iwe yaunogona kutora kutora firimu kana uchibheja pamakwikwi ane simba rakanyanya.
Kana kirabhu yekukwira, semuenzaniso, yakadaidzira makwikwi aunogona kutumira mahara-mahedheni nyaya, hazvingave zviri nani here kutora mukana nekutumira nyaya nezve shamwari mbiri dzekukwira panzvimbo peyawakagadzirira nezve Hondo Yenyika. ? Uye kana ikashevedzwa neiyo Association of Shamwari yeMacrame, haufunge here kuti chimwe chinhu chevakadzi chingave chakanaka? Kubheja pane izvi chinhu chinhu chinozviisa pasi asi chinogona kumirira kushamisika.
Kuti rako basa harikunde mumakwikwi hazvireve kuti rakaipa, pachokwadi rinogona kunge riine hunyanzvi, asi izvo zvinhu zvinogona kutungamira vatongi kuti vatsigire rimwe basa vanogona kuzviuru. Neichi chikonzero, iyo yakanakisa nzira yekuenderera nekuyedza mhanza haisi yekurasa tariro uye kutsvaga makwikwi matsva. Ndine chokwadi chekuti nekukurumidza kana gare gare basa rako richazivikanwa.
Chii chakashanda iwe kana zvasvika pakuendesa kumakwikwi ekunyora? Ndeapi mazano aungapa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Matipi ekuzviisa kumakwikwi ekunyora